The Ab Presents Nepal » सुनिल छिदालको ‘ए माया’ चर्चाको शिखरमा भिडियो हेर्नु होस्!
सुनिल छिदालको ‘ए माया’ चर्चाको शिखरमा भिडियो हेर्नु होस्!
दुबई,य़ुएइ – लामो समय नेपाली गीतसंगीतमा जीवन बिताएका कुशल निर्देशक रोजल थापाको नया गीतको भिडियो सावर्जनिक भएको छ । उक्त गीतमा एक ताकाका “भाइरल ब्वाई” सुनिल छिदालको स्वर, शब्द रचना र उनकै संगीतमा “ए माया” बोलको नयाँ गीतको भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो ।
रोमान्टिक थिमको भिडियो बनाउन सिपालु मानिने रोजल थापाले यस गीतको भिडियोलाई निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा गायक सुनिल स्वयं फिचर्ड छन् । उनको अपोजिटमा रोजिना राई छिन् र दुईको केमेस्ट्री सुहाएको देखिन्छ । गीतको भिडियोमा सुनिललाई रोजिनाको यादमा तड्पिएको देख्न सकिन्छ ।
यस गीतका सम्पूर्ण टिम लाइ बधाई दिदै भिडियो हेर्दिनु होला